I-powder Synephrine (94-07-5) hplc =98% | I-AASraw I-Fat ilahlekile i powder
I-AASraw ivelisa i-Cannabidiol (CBD) ipowder kunye ne-Hemp ebalulekileyo yeoyile ngobuninzi!
Amanzi anyibilikayo CBD
I-Hemp ebalulekileyo yeoyile
I-oyile yegolide yegolide
Ingqolowa yentsholongwane ikhupha umgubo
/ iimveliso / I-Fat Loss powder / Umgubo weSynephrine
Akukho kalo SKU: 94-07-5. Udidi: I-Fat Loss powder
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Synephrine powder (i-94-07-5), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Synephrine powder ividiyo
I-Raw Synephrine powder ezisemqoka
igama: I-powder Synephrine
Ifomula yeMolekyuli: C9H13NO2
Ubunzima Ezinto: 167.21
Melt Point: 187 ° C
Isitoreji sokugcina: Ifriji
umbala: I-White okanye i-white powstalline powder
Umphunga omninzi we-Synephrine kumjikelezo we-steroids
I-Synephrine powder yi-alkaloid ebonakalayo yendalo ethathwa njengekhuthazayo kunye ne-nootropic ngenxa yokuchaphazela ukunciphisa umzimba kunye neenkqubo zokuqonda kwingqondo. Ngokwendalo iSynephrine powder ifunyanwa kwezinye izityalo nakwizilwanyana, ngakumbi ipowder yeSynephrine efumaneka kwizongezo zokutya ikhutshwa kwaye yenziwe kwiCitrus Aurantium Plant eyaziwa ngokuba yiBitter Orange.
Ukusetyenziswa kwePowder Synephrine
Ukuthatha ithuba lokufumana amandla kunye neepropathi zamandla zeSynephrine powder, kungcono uthathe into yokuqala ekuseni okanye imizuzu ye-15 - 30 ngaphambi kokuzilolonga. Ukusebenza kwangaphambili kunye nokulahleka kwamafutha okuqukethe i-Synephrine powder kufuneka kuthathwe ngamanzi ngaphambi kokuzivocavoca. Elona thamo lisebenza kakhulu zii-15-25 zemigram ngokuhambisa.
Ziziphi iintlobo zeMiphumo okufanele ndiyilindele kwi-Raw Synephrine powder
Njengazo zonke izongezelelo zendalo, ungafaki ukulindela okungapheliyo kwi-Synephrine powder.
Khumbula ukuba izongezelelo azakheli izidalwa ezinkulu. Ukuzinikezela koqeqesho olufanelekileyo kunye nesondlo.
Oku kuthetha, nantsi into onokuyilindela kwi-supplementation ye-powder Synephrine:
Ukwanda kancinci kwinqanaba lakho lokunciphisa umzimba.
Ukunciphisa okuncane kumsebenzi wee-cell receptors ezithintela ukuhlanganiswa kwamafutha.
Ukwanda kancinci kwimpembelelo ye-thermic yokutya, okanye 'iindleko zamandla' zokuxilisa ukutya.
Ukuba loo nto ayizwanga yonke into enomdla kuwe, ndiyayiqonda. Ndiyifumela nje ngokuba kunjalo.
Oku kuthethi, akuthethi ukuba akufanele ufumane nge-syneprhine. Kuthetha nje ukuba akufanele ukongeza kuphela nge powder Synephrine ukuba ufuna ngokwenene ukuphucula.
Kuyafana okufanayo malunga nokuncediswa kwemvelo.
Ngabo ngokwabo, ngabanye, bayaphumelela. Thatha okulungileyo kunye, nangona kunjalo, kunye nemiphumo yokuqokelela ingabonakala.
Ngokomzekelo, ukuba udibanisa i-Synephrine powder kunye nearingin kunye ne-hesperidin, unokuphindwa kathathu ukukhulisa umzimba. Yaye ukuba uthe wongeza i-cafeine, nemiphumo iya kuba yongezwa ngakumbi.
Ngokwenene ukulahlekelwa kweoli, ukuba uthathe la mayeza amane ngosuku (ngokukodwa ngaphambi kokuba usebenze), kunengqiqo ukuthatha iiyunithi ezili-0.5 zokulahlekelwa kwamafutha ngeveki.
Kwaye kwanele ukuba kunzima ukuba uhlale uqeqesha ngamandla kwaye udle ngokufanelekileyo.
(Ndimele ndithethe ukuba unokulahlekelwa yioli-enenkani-ngokukhawuleza xa ukongeza i-yohimbine kumxube.)
Isilumkiso kwi powder Synephrine
Ngaphandle kokubanakho ukucinezela ukutya, iSynephrine powder ibonisa ubungqina bokuba uyakwazi ukutshisa amanqatha ngokwawo. Ke ngoko, iSynephrine powder ayinakuthathelwa ingqalelo njengesitshisi esinamafutha. Ngokuthatha umgubo weSynephrine ngesitshisi esinamafutha nangona kunjalo, uya kuziva ukuba awuzukulingwa kancinci ukuba utye ngexesha lakho njengoko uza kuhlala ugcwele ixesha elide kwaye unomdla wokutya ongaphaya kwendlela yakho yemihla ngemihla.
Kungenxa yokuba uncediso kwimarike akuthethi ukuba ufanele uyithathe. I-powder Synephrine isaqhubeka nokuvavanywa kwaye ezinye iziphumo zibonisa ukuba xa zisebenzisiweyo, zinokubangelwa yimiphumo emihle, njengentloko, isicaphulo, kunye neemvakalelo zesisu. Yilungele ukuxwayisa ukuba ekubeni i-Synephrine powder ibonwa njengento ekhuthazayo, ukuba abo banomngcipheko wegazi ophezulu okanye banomngcipheko wesifo senhliziyo okanye baye bafumana isifo, ukuba kufuneka ugweme ukuthatha le mveliso inokubangela ukwanda kwengozi kuba iphakamisa izinga lentliziyo.
Ngoko, umbuzo oyintloko, ukuba ufanele uthathe i-Syneprhine? Ngokunyanisekileyo, ngaphandle kokuba uyisebenzisayo ukunyanga intsholongwane yesikhumba, ndiyaboni isizathu sokuba umntu asebenzise le ncediso. Ukuba awukwaziswa ngunyango wezokwelapha ukuba uthathe i-synpehrine, vele uhlale kude naloo mngcipheko ophezulu kakhulu ukuba ucinge ngomvuzo onokukunika wona. Nangona andinakukuxelela oko kufuneka kwaye akufanele uthathe, ndiyakholelwa ukuba ngokuyidla le mveliso xa ungafundiswanga kwakhona, ukuze ugqibe ekugqibeleni wenze umzimba wakho ube yingozi ngaphezu kokulungileyo.
Ukuba ugoba nge-intanethi ukuze uphendule, uya kufumana izilumkiso eziqinileyo ukuba i-Synephrine powder inokunyusa umngcipheko wokuxinzelela kwegazi, ukuphazamiseka, ukuhlaselwa yintliziyo, ukuphazamiseka, kunye nezinye 'iziphumo ezibi kakhulu.'
Ewe, uphando oluninzi luye lwabonisa ukuba i-Synephrine powder ayinyusa uxinzelelo lwegazi, kwaye uphando lubonisa ukuba ngokubanzi lukhuselekile kwaye lunyamezeleke.
Inyani yile xa ufana nabantu abaninzi, awuyi kuqaphela okuninzi xa uthatha iSynephrine powder Uninzi lwengxelo yokunyuka kancinci kwamandla kwaye akukho namnye kwezona zinto ziphantsi zihlala zinxulunyaniswa nezinto ezikhuthazayo (jitters, nausea, ukubetha kwentliziyo ngokukhawuleza, njl. ).
Oko kwathiwa, ukuba unayo iimeko zonyango okanye uthathe nayiphina imishanguzo enokuthi ingaphikisani nokuxhaswa kunye ne-Synephrine powder, qhagamshelana nogqirha wakho ngaphambi kokusetyenziswa, kunjalo. Iimzekelo zengcinezelo ephezulu yegazi, abachasayo, kunye ne-HIV / AIDS.
I mi yalelo
I-Synephrine powder, okanye njengoko iyazi ngokuqhelekileyo, i-Bitter Orange, isityalo apho iqabunga, izithelo kunye nejusi yeziqhamo zivunwa kwaye zisetyenziselwa ukwenza iyeza kunye ne-peel ngokwayo isetyenziselwa ukwenza ioli. Ioli ye-orange enomsindo ingasetyenziselwa ulusu ukunceda ukunyanga izifo, ezinjengeengqungquthela kunye nabadlali beenyawo.
Nangona uphando oluninzi luqhutyelwa, kukho ubungqina obaneleyo bokubonisa ukuba xa umntu edla inani elaneleyo lomnxeba, unamandla okukhusela ukutya. Yilapho i-powder Synephrine ibonisa iimpawu zokulahlekelwa kwesisindo phakathi kwabasebenzisi njengoko idala umphumo ongapheliyo emzimbeni ukwenzela ukuba umthengi azive epheleleyo ixesha elide kwaye unciphise nasiphi na isilingo ngenxa yokuthanda okanye umnqweno wokutya ukutya okunye. Ngokutya ukutya okuncinci, udla iikhalori ezingaphantsi, eziza kubangela ukulahleka kwesisindo ngexesha elide.
Uphando malunga nobukhulu obuqhelekileyo (ngaphakathi kwe-1kg) lungathunyelwa kwiiyure ze-12 emva kokuhlawula.
Ukwenza umyalelo omkhulu ungathunyelwa kwiintsuku zokusebenza ze-3 emva kokuhlawula.
Ukubonelelwa kwikamva elizayo.
Indlela yokuthenga i-Synephrine powder kwi-AASraw
1.Ukuqhagamshelana nathi nge-email inquiry system, okanye kummeli we-skype ummeli wesevisi (CSR).
2.Ukusibonelela ngobuninzi bakho kunye neadesi.
I-3.I-CSR yethu iya kukunika isingeniso, ixesha lokuhlawula, inombolo yokulandelela, iindlela zokuhambisa kunye nomhla wokufika oqikelelwayo (i-ETA).
I-4.Inkokhelo eyenziwe kwaye iimpahla ziya kuthunyelwa kwiiyure ze-12 (Ukuze ulandelwe ngaphakathi kwe-10kg).
5.Goods zifunyenwe kwaye zinike izimvo.
1-Chloromethyl-6-chloro-6-Dehydro-17a-Acetoxy Progesterone Powder (17183-98-1)
I-powder Synephrine HCL
ICannabidiol kunye ne-CBD
Amanzi ane-Soluble CBD
Yegolide oyile hemp
Ukusetyenziswa kwamadoda (3)
Ukusetyenziswa kwabasetyhini (3)
I-Nootropics powder (14)
Powder yeUrolithin (2)
I-Spermidine Powder (3)
Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones (11)
I-Fat Loss powder (15)
I-Cetilistat powder eluhlaza okwehliswa kwesisindo
I-turinabol yomlomo yompu: Ngaba uyazi amaqiniso malunga ne powder steroid?
Ukusuka kwiReddit kunye neQuora: Imibuzo eli-12 (Eshushu Exoxisanayo) malunga neNMN
Yintoni ekusetyenziselwa ngayo i-Nandrolone injano?
I-PCT Letrozole ipowder eluhlaza-Izinto ezintlanu ekufuneka ndizazile !!!
Iziyobisi ezisixhenxe eziphezulu zokunyanga umhlaza wemiphunga-wamkelwe yi-FDA
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga ne-Sunitinib Malate 丨 AASraw
Zeziphi ezona ziyobisi ziSebenzayo ukunyanga umhlaza webele?
Amachiza alwa nomhlaza Acalabrutinib: Unyango lwe-CLL / SLL / MCL
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.dzanlbb.com www.cakapi.com www.apicdmo.com